Af-soomaali (somaliska) - CSN
CSN waa hey’adda dowladda ee maareysa taageerada dhaqaalaha ee waxbarashada ee iswiidhishka, micnaha kaalmada dhaqaalaha iyo deynta waxbarashada loogu tala galay. Waxaan xitaa maareynaa deynka leysinka darawalnimada iyo deynka guri alaab dhigashada. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa wax dheeraad ah oo ku aaddan taageerooyinka kala duduwan. Macluumaadka Soomalidu waa heer guud ahaaneed.
Ku cusub Iswiidhan, qaxootina ah
Taageero dhaqaale oo waxbarasho – kaalmo dhaqaale iyo deyn loogu tala galay waxbarashada
Dib u bixinta deynta waxbarashada
Deynka guri dhigashada - waxaa loogu tala galay adigaaga qaxootiga ah
Deynka leysinka darawalnimada – loogu tala galay adigaaga shaqo la’aanta ah
Iswiidhan ma waxaad u timid qaxooti ahaan? Halkan waxaa ku jira macluumaad loogu tala galay adigaaga qaxootiga ah ama guudmaanka u ah canug waddanka kaligiis yimid.
Ma tahay muwaadin ajnabi ah?
Adigaaga ah muwaadin wadan kale u dhashay xaq waad u yeelan kartaa taageero dhaqaale oo waxbarasho oo iswiidhish ah haddii aad buuxineysid shuruudaha qaarkood. Haddii aad sharci degganaansho oo joogto ah (PUT) leedahay, deggantihidna Swiidhan xaq baad badanaa u leedahay kaalmo dhaqaale oo waxbarasho oo swiidhish ah.
Haddii aad Laanta qaxootiga ka heshay sharci degganaansho oo waqti go’an ah iyadoo ay sababtu tahay xaalad qaxootinnimo ama wax u eg, xaq baad sidoo kale badanaa u leedahay taageero waxbarasho oo iswiidhish ah. Laakiinse ka megengelyo doon ahaan xaq uma lihid taas.
Marka intaas laga reebo waxaa jira xeerar kala duwan iyadoo ku xiran in aad u dhalatay waddan ka mid ah waddamada Midowga Yurub/Iskaashiga dhaqaalaha ama Swiizerland ama waddan kale.
Taageerada swiidhishka ah ee loogu tala galay wax ku barashada swiidhan
Taageerooyinka dhaqaale ee waxbarashada ee kala duduwan
Waxaa jira taageero waxbarasho oo kala duwan oo ku kala xiran waxa aad baraneysid iyo da'daadu inta ay tahay. Waa kuwan kuwa caadiga ahi:
Caawimaad dhaqaale oo waxbarasho - taageero dhaqaale oo loogu tala galay adigaaga wax ka barta dugsiga sare ee jira 20 sanno ama ka yar
Haddii aad dhigatid dugsiga sare waxaad heli kartaa caawimaad waxbarasho ilaa iyo xilli dugsiyeedka guga ee sannadka aad buuxineysid 20 sanno. Caawimaadda waxbarashadu waxay ka koobantahay kaalmooyin kala duduwan, tusaale ahaan kaalmo waxbarasho iyo gunno dheeraad ah. Gunnada dheeraadka ah waa kaalmo aad adigu raadsan kartid haddii qoyskaaga dakhligiisu uu hooseeyo.
Waxyaabo warbixin ah oo loogu tala galay adigaaga heysta dhalashada wadan kale
Kaalmo dhaqaale oo ka socota CSN oo loogu tala galay waxbarashada dugsiga sare
Playtime: 03:47, English speech, texted in Somali
Sida loo codsado deeqaha waxbarasho
Playtime: 05:23, Subtitle in Somali Swedish speech
Lacagta waxbarashadu waxey ka koobantahay qeyb kaalmo ah iyo qeyb deyn ah. Waxaad lacag waxbarasho codsan kartaa laga billaabo xilli dugsiyeedka deyrta ee sanadka aad buuxineysid 20 sano. Haddii aad dhigan doontid waxbarasho ka dambeysa dugsiga sare, tusaale ahaan jaamacad, waxaad codsan kartaa lacag waxbarasho xitaa haddii aad ka yartahay 20 sanno. Amaahda waxbarasho waa khasab in aad dabadeed dib u bixisid.
Taageero waxbarasho oo ka socota CSN oo loogu tala galay waxbarasho (kaalmo iyo deyn)
Taageerada waxbarasho billaabidda – loogu tala galay adigaaga shaqa la’aanta ah
Taageerada billaabidda waxbarashada waxaa loogu tala galay adigaaga bilaa shaqada ahaa wakhti dheer ee u baahan dhigashada dugsiga hoose-dhexe ama dugsiga sare si aad u hesho shaqo. Waa kaalmo aad heli kartid ugu badnaan 50 toddobaad haddii aad wax barato wakhti buuxa.
Kaalmada bilaawga waxbarasho
marka shaqo la’aan jirto
Haddii aad wax ku baratay Deynta waxbarashada (Studielån) ee ay bixiso Hay`adda Arrimaha Waxbarashada [CSN], waxaad bilaabaysa dib u bixinta deynta, markii aad hakad geliso ama aad waxbarashada Deqda/deynta waxbarashada [Studiemedel] ka qalin-jebiso. Nidaamku waa sidaas xitaa haddii shaqolaawe aad tahay, aad ku nooshahay Lacagta waalidiinta (föräldrapenning) ama dal dibadda ku yaallo u guurto. Halkaan ka aqriso warbixin ku saabsan dib u bixinta deynta iyo talaabada aad ka qaadi karto haddii dhibaato ay ka hayso dib u bixinta deynta.
Adigaaga soo gelaya qaabilaadda qaxootiga ee degmadu waxaad amaahan kartaa lacag si aad gurigaaga ugu iibsatid alaab iyo qalab kale. Waxay noqon karaan sariirro, saxaman, digsiyo iyo kuraas. Lacagta uma isticmaali kartid tusaale ahaan cunto, taleefan-gacan ama kirada guriga. Inta ay la egtahay lacagta laguu oggolyahay inaad amaahato waxay ku xirantahay inta qoyskaagu la egyahay, wixi horay guriga u yiillay iyo inta ay la egtahay lacagta aad horay u heysato.
Lacagta aad deynsaneysid waa in aad gadaal dambe ka soo celisid. Waxaad bilaabeysaa inaad amaahda dib u bixisid 2 sanno ka dib marki aad heshay lacagti ugu horeysay.
DEYNKA ALAAB GURI DHIGASHADA
Warbixinta amaahda lacagta guriga alaab dhigashada
Play video: Muxuu yahay deynka guri qalabeysashadu? (Lagu qorey Soomaali)
Playtime: 01:17, Somaliska speech
Play video: Sidee Swiidhan lacag loo deynsadaa? (Lagu qorey Soomaali)
Playtime: 02:32, Somaliska speech
Play video: Sidee loo codsadaa deyn guri qalabeysasho? (Lagu qorey Soomaali)
Playtime: 01:10, Somaliska speech
Play video: Imisa ayaa la deynsan karaa? (Lagu qorey Soomaali)
Playtime: 01:22, Somaliska speech
Play video: Sidee lacagta loola bixi karaa? (Lagu qorey Soomaali)
Playtime: 01:55, Somaliska speech
Play video: Dhibaato xagga lacag dib u bixinta ah (Lagu qorey Soomaali)
Playtime: 00:49, Somaliska speech
Adigaaga shaqo la’aanta ah waxaad lacag ka deynsan kartaa CSN si aad u qaadatid leysin darawalnimo oo heerka B ah. Leysinka darawalnimada waxaa kuugu fududaanaya in aad shaqo heshid. Si aad xaq ugu yeelatid deynka waa in aad shaqo la’aan tihid, una dhexeysid 18 iyo 47 sano. Waa in sidoo kale aad buuxisid shuruudo go’an. Waxaad ugu badnaan deynsan kartaa 15 000 oo koron. Deynka waxaa khasab ah in aad dib ka soo celisid, waana in aad taas sameysid xitaa haddii aadan qaadan leysinka darawalnimada.
Deynka leysinka gaari wadidda – caawimaad ku
aaddan dadaalka loogu jiro in shaqo la helo
Marka aad nala soo xiriireysid waxaad jawaab ku heli kartaa iswiidhish ama ingiriis.
Su’aalo ku aaddan xaqa taageerada waxbarashada iswiidhishka
Wixii ku saabsan xaqa taageerada waxbarashada iswiidhishka nagala soo xiriir
Fur foomka e-mailka
Caadi ahaan waxaan ku soo jawaabeynaa 3 maalmood oo shaqo gudohood
Su’aalo ku aaddan taageerada waxbarashada
Wixii ku saabsan waxbarasho nagala soo xiriir
Su’aalo ku aaddan dib u soo celinta lacagta waxbarashada
Wixii ku saabsan lacag dib u soo celinta nagala soo xiriir
Su’aalaha ku saabsan amaahda lacagta guriga alaab dhigashada
Wixi ku saabsan amaahda lacagta guri alaab dhigashada nagala soo xiriir
Su’aalaha ku saabsan deynka leysinka darawalnimada
Wixii ku saabsan leysinka darawalnimada nagala soo xiriir